Ungayifaka kanjani i-Optifine yeMinecraft? - Ukudlala
I-Optifine kalula ingenye yezindlela ezinhle kakhulu ezingasetshenziswa ku-Minecraft. Kuyindlela ye-java edition esiza ekusebenzeni nasekuthuthukiseni imidwebo yoMdlalo. Ungajabulela indawo yonke yeMinecraft ngokukhululekile nge-optifine. Yize umdlalo utholakala kuwo wonke amapulatifomu wokudlala, i-optifine isebenza kuphela kumaKhompyutha. Awukwazi ukuyifaka kumaselula noma kuma-Consoles.
Kule ndatshana, sizobheka ukuthi Ungayilanda kanjani futhi uyifake kanjani i-optifine kwi-PC yakho.
Izinyathelo Zokulanda Nokufaka i-Optifine ku-Minecraft:
Ukufaka i-mod kwikhompyutha yakho, kuzofanela uqale ulande isifaki.
Chofoza kulezi zixhumanisi, isixhumanisi 1 noma isixhumanisi 2 . Lokhu kufanele kukuyise kumawebhusayithi asemthethweni we-optifine lapho ungalanda khona isifaki. Ngemuva kokuthi ukuwebhusayithi, bheka imenyu yokulanda.
Uma usuchofoze inketho ethi LANDA, izokuqondisa kabusha ekhasini elisha elizogcwala izikhangiso. Linda imizuzwana emi-5 bese uqhafaza kunketho ethi “yeqa”, ezovela ekhoneni eliphezulu kwesokudla lewindi. Qiniseka ukuthi awuchofozi okunye.
Uma ushaya inkinobho yokulanda, izokucela imvume yokugcina ifayili. Qiniseka ukuthi ubheka ukunwetshwa kwefayela ngaphambi kokuvumela. (kufanele kube yifayela le-.JAR)
Qhafaza kwesokudla kwisifaki bese uqhafaza ku- “open with” bese ukhetha inketho ye- “Java Platform SE Binary”. Shaya inkinobho yokufaka.
Ngemuva kokuthi ufake i-mod ngempumelelo, Udinga ukwethula iGame.
Ngemuva kokuchofoza kuyo, kuzoba nemenyu ezivelelayo ezokukhombisa amamodeli owafakile kwi-PC yakho. khetha i- “optifine” kusuka lapho bese ushaya u- “play”
Kufanele ukwazi ukuqinisekisa ukuthi imodi isebenza ngempumelelo ngokubheka phezulu ngakwesokunxele kwesikrini seMidlalo.
I-Optifine MAHHALA nganoma yiziphi izindleko. Ungayilanda kusuka kumawebhusayithi amabili esishilo esihlokweni ekuqaleni.Uma ucelwa ukuthi ukhokhe, ukuwebhusayithi engalungile futhi ukhwabaniselwa.
1Q. Yiluphi uhlelo lwe-Optifine ongalulanda?
Iminyaka:I-OptiFine Ultra uhlelo oludume kakhulu okufanele ululande.
2Q. Ungayibuyekeza kanjani i-optifine?
Iminyaka:Udinga ukuvakashela iwebhusayithi ye-optifine bese ulanda inguqulo ebuyekeziwe ngokushesha ngaphandle kwezinkinga.
3Q. Kuthiwani uma ingekho inketho yokuvula nge 'Java Platform SE Binary'?
Iminyaka:Amathuba ukuthi awunayo i-Java efakwe kwi-PC yakho. ungayilanda kusuka ku- lapha
4Q. Ngikuqinisekisa kanjani ubuqiniso besifaki?
Iminyaka:Ngokuhlola i-URL yewebhusayithi. Kukhona amawebhusayithi amabili kuphela angempela esiwasho ngenhla kule ndatshana.
I-Optifine iyindlela enhle yokukhulisa umuzwa wakho we-Minecraft. Njengoba iza mahhala, kuhle kakhulu ukuba nayo. I-Optifine inokuguquguquka ngokuya ngamakhompiyutha ayisebenzisayo njengoba ungakusebenzisa kuma-setups aphezulu kanye nakuma-Setups adonsa kanzima ekwenzeni imisebenzi yansuku zonke.
Imibono nezeluleko ezinhle kakhulu ze-Minecraft Skin